AKHRISO:- Laba Dal oo Carbeed oo dib isugu Furay Xuduudahooda kadib 29 sano oo aan la isku gudbin. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ February 20, 2020 ] Afhayeenkii hore ee Puntland Quraan Jecel “Puntland iyo shacabkeeda ha ogaadaan isbadalka kajira Geeska Africa oo hurdada haka toosaan”.	Faalloyinka
[ February 20, 2020 ] DAAWO:-Askarigii Hargaysa ku dhex garaacay Gabadha oo la waraystay “Xaaskayga bay ahayd sanad bay iga maqnayd”	Faalloyinka
[ February 20, 2020 ] AKHRISO:- Duqa Muqdisho oo amar ku bixiyay in la xiro dhamaan Xarumaha Forex ee Xamar.	Faalloyinka
HomeFaalloyinkaAKHRISO:- Laba Dal oo Carbeed oo dib isugu Furay Xuduudahooda kadib 29 sano oo aan la isku gudbin.
AKHRISO:- Laba Dal oo Carbeed oo dib isugu Furay Xuduudahooda kadib 29 sano oo aan la isku gudbin.
July 17, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 0
Xuduudka u dhexeeya Dalalka Ciraaq iyo Sucuudiga ayaa la rejaynayaa in dib loo furo 15-ka October ee sannadkan 2019-ka, sida uu sheegay Safiirka boqortooyada Sucuudiga u fadhiya Baqdaad, Salaasada Maanta.
Kaantaroolka Arar oo ah marinka ay iskaga gudbaan labada dhinac, ayaa la xidhay Sannadkii 1990-kii oo ay ka soo wareegtay 29 sannadood, ka dib markii uu xumaaday xidhiidhka labada Waddan, xilligaas oo Madaxweyne Saddaam Xuseen uu weerarray Kuwait.
In xuduudka dib loo furayo ayaa waxa ku dhawaaqay Safiirka Sucuudiga ee Ciraaq Abdul Aziz Al Shammari, taasina waxay muujinaysaa inuu soo laabtay Xidhiidhkii labada Waddan ee jaarka ahi.
Wada-hadallo lagaga hadlayey dib u furista xuduudka labada Waddan ayaa dhacayey dhowr sanadood, taasi oo looga dan lahaa in la xaqiijiyo xidhiidhka ganacsi ee labada Dal.
Dawladda Sucuudiga ayaa sannadkii 2015-tii dib u furtay Safaaraddeedii Ciraaq, Nus qarni ka dib.
Adel Al Jubeir oo ahaa Wasiirkii Arrimaha dibedda ee Boqortooyada Sucuudiga ayaa sannadkii 2016-kii booqday Caasimadda Ciraaq, taasina waxay calaamad u ahayd soo noqoshada xidhiidhkii labada Dawladood.
Dhanka kale, Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa bishii April ee sannadkan 2019-ka ku dhawaaqaday Mashruuc ku kacaya $50 million dollars, kaasi oo dib loogu dhisayo Masaajid weyn oo ku yaalla Magaalada Mosul, kaasi oo magaciisu yahay Al-nuur, isla-markaana ay burburiyeen kooxda Daacish.
DAAWO:- DFS oo darajo dalacsiin ah gudoonsiisay saraakiil Bolis oo lasoo xulay.
Ilhaan Cumar oo ka guuleeystay Trump kadib markii golaha wakiilada ay si wayn u ansixiyeen Moshin kadhan ah Madaxwaynaha.
DAAWO:-Askarigii Hargaysa ku dhex garaacay Gabadha oo la waraystay “Xaaskayga bay ahayd sanad bay iga maqnayd”
Muuqaal dhawaan lagu baahiyay baraha Bulshada ayaa noqday mid falcelin badan dhaliyay kaasi oo laga duubay askari katirsan ciidanka Somaliland oo laamiga Badhtankiisa ku dhex garaacaya Gabar da’yar ah. Muuqaalkaas [Read More]